Falastiin oo xir xirtay siyaasiyiin ay ku eedysay inay qeyb ka ahaayeen heshiiska Israel iyo Imaaraadka. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Falastiin oo xir xirtay siyaasiyiin ay ku eedysay inay qeyb ka ahaayeen...
Falastiin oo xir xirtay siyaasiyiin ay ku eedysay inay qeyb ka ahaayeen heshiiska Israel iyo Imaaraadka.
Dalalka khaliijka carabta ayaa dhowaan waxay heshiis la galeen qaarkood Isreal waxayna taasi abuurtay in Dahlan lagu eedeeyo in uu arrintaas door ku leeyahay.
Kooxda Dahlan ayaa dalalka Carabta ku dhaleeceysay xiriirka ay la yeesheen Isreal ka hor inta aan xal loo helin mushkuladda falastiin, hase yeeshee ma uusan inkirin doorkiisa ku aadan arrintan socota.
Madaxii hore ee ciidanka amniga jiidda Gaza, Dahlan ayaa muddo dheer ahaa ninka la aaminsanaa in uu bedeli doono Maxamuud Cabbaas ayaa xiriir weyn oo saaxiibtinimo ah la yeeshay Imaaraadka tan iyo intii uu musaafuris ahaan ugu noolaa wadankaas.
Imaaraadka iyo Baxreyn ayaa xiriri diplomaasiyadeed la saxiixday Isreal todobaadkii hore xaflad uu martigeliyay madaxweyne Trump.Heshiiska wuxuu ahaa kii ugu horeeyay oo dhex mara dalalka Carabta iyo Isreal muddo ka badan 20 sano, Falastiiniyiinta ayaa heshiiskaas ku tilmaamay khiyaano lagu sameeyay qadiyadda Falastiin.
Previous articleAxmed Madoobe oo Baarlamaanka ugu baaqay in ay Ra’iisul wasaaraha cusub ansixiyaan.
Next articleMareykanka tirada dhimashada oo ku dhow 200,000 oo ruux.